ईएनटी अप्रेशन अब नाम्ची अस्पतालमै - The Sikkim Chronicle
SC Desk Apr 23, 20210107
SC Desk Apr 20, 20210353
SC Desk Feb 4, 20210550
SC Desk Oct 28, 20200441
admin Sep 1, 202001244
SC Bureau Feb 27, 20210139
SC Bureau Jan 16, 20210993
SC Desk Nov 30, 202001243
SC Bureau Feb 23, 20210148
SC Desk Feb 14, 20210305
SC Bureau Apr 23, 2021052
Shradha R. Chhetri Mar 23, 20210337
SC Bureau Mar 8, 20210281
Bimal Thapa Feb 4, 20210265
Nov 8, 2020 - 17:50
गान्तोक, 07 नोभेम्बर: नाम्ची जिल्ला अस्पतालमा कान-नाक-गला (ईएनटी) शल्यक्रिया (अप्रेशन) शुरु गरिएको छ। राज्यका मुख्यमन्त्री पीएस तामाङ (गोले)ले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त जानकारी सार्वजनिक गरेका हुन्। ईएनटी अप्रेशन टोलीमा डा. छिरिङ शेर्पा, डा.मोहन अनि डा. रुबेन रहेका छन्। जिल्ला अस्पतालमै यस्तो सुविधा उपलब्ध गराइए पछि अब उसो दक्षिण तथा पश्चिम जिल्लाका नागरिकहरुलाई धेरै सहज हुने भनी मुख्यमन्त्रीले भनेका छन्।
मुख्यमन्त्रीले आफ्नो पोस्टमा विगत 18 महिनामा आफ्नो सरकारले राज्यमा स्वास्थ्य सुविधा अझ राम्रो बनाउन सरकारले चालेका कदमहरुबारे बताएका छन्। एसटीएनएम अस्पतालमा हालै स्थापित तृतीयक क्यान्सर केयर सेन्टर साथै गेजिङ, नाम्ची अनि एसटीएनएम अस्पतालमा स्थापित डाइलाइलिस् सेन्टर बारे तिनले उल्लेख गरेका छन्। आर्थिक हिसाबले विपन्नहरुका निम्ति स्वास्थ्य बीमाको पनि सरकारले व्यव्स्था मिलाइदिएको तिनले आफ्नो पोस्टमार्फत जानकारी गराएका छन्।
राज्यको स्वास्थ्य सुविधालाई अझ उत्तम बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको अनि निकट भविष्यमा विभिन्न कार्यक्रमहरु शुरु गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको तिनले बताए। यो सम्पूर्ण जनताको माया, विश्वास अनि साथले मात्रै सम्भव भएको भन्दै तिनले जनतालाई धन्यवाद साथै बधाई दिएका छन्।
Alcoholism in Sikkimagrowing concern despite rehabs seeking better solutions
Bimal Thapa Nov 3, 20200932
Bimal Thapa Oct 16, 20200680
Bimal Thapa Jun 16, 20200617
admin Jul 17, 20200457
Bimal Thapa Jul 13, 20200749
Bimal Thapa Jul 1, 20200656
SC Desk Apr 20, 20210361
SC Desk Oct 17, 20200796
admin Sep 1, 202001793
admin Sep 26, 20200669
SC Desk Sep 19, 202001131
admin Sep 28, 20200656
admin Sep 2, 202001109
admin Oct 2, 20200256
SC Desk Feb 28, 20200259
Bimal Thapa Sep 19, 202001349
SC Desk Jul 2, 20200449